Lionel Messi oo goor dhow Loo Caleemo saari doono Laacibka ugu fiican…… – Gool FM
Lionel Messi oo goor dhow Loo Caleemo saari doono Laacibka ugu fiican……
Dajiye January 28, 2019
(Spain) 28 Jan 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa la filayaa in xiliyada soo aadan uu guddoomi doono abaal marin cusub ee shaqsiyadeed.
Lionel Messi ayaa loo caleema saari doonaa sida qorsheysan abaal marinta ciyaaryahanka ugu fiicnaa horyaalka La Liga ee dalka Spain sanadkii lasoo dhaafay ee 2018, kadib xaflad balaaran uu abaal marino ku bixin doono wargeyska Mundo Deportivo.
Wargeyska Mundo Deportivo ayaa wuxuu dhinaca kale xaqiijiyay in sidoo kale xidigaha Samuel Umtiti iyo Ivan Rakitić, lagu abaal marin doono, in koobkii aduunka 2018 ee ka dhacay dalka Russia ay xulalkooda France iyo Croatia ku kala hogaamiyeen inay kaga dhameystaan boosaska koowaad iyo labaad sida ay u kala horeeyaan.
Sida ay wararku xusayaan xafladaan ayaa waxaa kasoo qeyb gali doona wafdi balaaran ee ka socda Barcelona uu hogaaminayo madaxweynaha kooxdaas Josep Maria Bartomeu.
RASMI: Goorta la ciyaarayo Somali Super Cup oo la shaaciyay....(GoolFM oo Doorkan ka ciyaari doonta kulanka)
Bale oo BOQOLKA xiray